रोजेको जिल्लामा पर्न एसपीहरूको कसरत ! – TajaNepal
Home /Blog/रोजेको जिल्लामा पर्न एसपीहरूको कसरत !
रोजेको जिल्लामा पर्न एसपीहरूको कसरत !
काठमाडौँ । अहिले नेपाल प्रहरीमा सरुवा–बढुवाको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा हरेक पटक ठूला नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर भिड्ने गर्छ । केही समयअगाडि डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा हुँदा यस्तो प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । अहिले चितवन, पर्सा, रूपन्देही, कास्की जस्ता जिल्लामा जानका लागि एसपीहरू सोर्सफोर्स भिडाउँदै छन् । कार्यक्षमता र योग्यता भए पनि ठूला नेताको पहुँचमा नभए रोजेको ठाउँमा जान नसकिने मान्यता प्रहरीमा छ । आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल इटालीको भ्रमण सकेर फर्केपछि एसपी सा’पहरूको सरुवाको घनचक्कर बढ्ने छ । आईजीपी खनालले सङ्गठनलाई वास्ता नगरी नेताको घरमा धाउनेहरूलाई बढुवा पनि गर्दिनँ, सरुवा हुन चाहेको ठाउँ पनि दिन्नँ भनेका थिए । तर उनी नै झुक्नुप¥यो । राजनीतिक हस्तक्षेप र हैकमका अगाडि आईजीपीको केही लागेन । सशस्त्रमा गत साता त्यस्तै भयो । प्रहरीको रासन, लत्ताकपडाको टेन्डरदेखि भवन निर्माणसम्मको ठेक्कामा नेताहरूकै सोर्सफोर्सले काम गर्छ भन्ने कुरा आईजीपीले बल्ल भोग्दैछन् । खानेपानीमन्त्री विना मगरको सोर्स भिडाएका एसपी नवराज अधिकारी हुन् वा कर्मचारी प्रशासन ताकेका जनार्दन जिसी किन नहून्, उनीहरूले सोर्स भिडाएकै हुन् । नौ महिना पुगेका जिल्लाको कमान्ड गरिरहेका एसपीहरूलाई ठाउँ सारेर नयाँ जान चाहेकामध्ये आईजीपी सचिवालयका दानबहादुर कार्की रूपन्देही, प्रधान कार्यालयका दानबहादुर मल्ल चितवन, सोमेन्द्रसिंह राठौर कास्की, चन्द्रकुवेर खापुङ पर्सा, रमेश थापाले आईजीपी सचिवालय ताकेका छन् ।
एसपी अभूषण हिस्स !
एसपीहरूले सीमा नाकाका जिल्ला रोज्नुको कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी नै प्रमुख हो । कैलालीका एसपी आभूषण तिमिल्सिनाले बैतडीका २९ वर्षीय नीरज चन्दले भारतबाट चोरेर ल्याएको २२ लाख ३८ हजार रकममध्ये १३ लाख कुम्ल्याएर चोर चन्दलाई छाडेको घटनाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । भारतकै राजस्थान राज्यका अर्थमन्त्रीको घरबाट चोरिएको रकम प्रहरीले १३ लाख झ्याप पारेर चोर्ने व्यक्ति छाडेको घटना धेरै समय लुक्न सकेन । भारतबाट कुलदीप शर्मा काठमाडौँ हुँदै कैलालीका एसपी तिमिल्सिनासम्म पुगेका थिए । सुरुमा एसपीले आलटाल गरे, भारतीय दूतावासबाट गृह मन्त्रालयमा दबाब पर्ने भएपछि रू. १३ लाख माटोमा गाडेर चोर चन्दले नै राखेको बनाएर फिर्ता गर्नुपरेको घटनाले एसपी आभूषणको चरित्र पनि बाहिरियो । १३ लाख पाएपछि एसपीले चोर छाडेका थिए ।
एसएसपी धानुकको कमाइ
आफ्नो टोल–छिमेकमा समेत प्रहरी रवाफ देखाएर धम्क्याउने ललितपुर प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र धानुकले ललितपुरका लेले, टीकाभैरव र देवीचौरका ढुङ्गाखानी सञ्चालकहरूसँग राम्रै कमाइ गरेका छन् । माओवादी नेता जनार्दन शर्माका साख्खै मान्छे धानुकको कमाइ जिल्लाका प्रहरी प्रभाग र इकाइबाट उठ्ने पैसा हो । दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि प्रमुखसम्मलाई हात लिएको बताउँछन् । सुदर्शन विष्ट नामका दलाल र प्रहरी एसएसपी रवीन्द्र धानुकबीच घन्टौँ प्रहरी कार्यालयमा गोप्य वार्ता हुने गर्छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष विष्णु महर्जन आफैँ क्रसर उद्योग मालिक हुन् । उनको टिमका हर्ताकर्ता सुदर्शन विष्ट हुन् ।